Muxuu ka yiri Dani Alves kadib markii uu Lionel Messi dhaafay rikoorkii kaga yiilay horyaalka La Liga? – Gool FM
Muxuu ka yiri Dani Alves kadib markii uu Lionel Messi dhaafay rikoorkii kaga yiilay horyaalka La Liga?
(Manchester) 26 Sab 2018. Difaaca reer Brazil iyo kooxda PSG Dani Alves ayaa kaga hadlay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, kadib markii uu dhaafay Lionel Messi rikoorkii kaga yiilay horyaalka La Liga.
Dani Alves oo haatan da’adiisu tahay 35 ayaa ah ciyaaryahanii ugu badnaa ee Ajanabi ah ee ugu safashada badnaa taariikhda horyaalka La Liga ee dalka Spain kadib kulamadii uu kaga soo muuqday kooxaha kulankii Sevilla iyo Barcelona ee gaarsiisnaa 422 kulan, ka hor inta uusan Lionel Messi jabinin rikoorkiisa, kadib markii uu ciyaaray ciyaartii Girona kulankiisii 423-aad.
Dani Alves ayaa bogiisa rasmiga ah ee Twitter-ka kusoo qoray fariin uu kaga hadlay in Lionel Messi uu dhaafay rikoorkiisa wuxuuna isagoo qoslaya yiri “Maya”.
Alves ayaa sanado badan u ciyaaray kooxda horyaalka La Liga ee dalka Spain ee Sevilla iyo Barcelona, ka hor inta uusan u dhaqaaqin Juventus xagaagii 2016-ka, waxaana uu ugu dambeyntii u dhaqaaqay isla markaana uu haatan ku sugan yahay Paris St Germain.
Shaxda rasmiga ah ee Sevilla vs Real Madrid
Philippe Coutinho oo soo barbareeyay Lionel Messi